नेपालमा कस्तो छ जनस्वास्थ्य र जनस्वास्थ्यकर्मीको अवस्था? – Health Post Nepal
नेपालमा कस्तो छ जनस्वास्थ्य र जनस्वास्थ्यकर्मीको अवस्था?
२०७७ जेठ १६ गते १३:२६
नेपालमा जनस्वास्थ्य विषय कस्तो होला ?, जनस्वास्थ्य पढेकाले के काम गर्ला ? भन्ने कुरा आममानिसमा कौतूहलको विषय भएको छ। मानिसहरूले स्वास्थ्य संकायअन्तर्गत धेरै नाम चलेका वा सुनेका विषयहरू छन्। जस्तैः नर्सिङ, चिकित्सा, ल्याब, फार्मेसी आदि। त्यस्तै स्वास्थ्य संकायअन्तर्गत जनस्वास्थ्य अर्थात पब्लिक हेल्थ पढेका र बुझेका मानिसहरू भने कम नै भेटिन्छन्।
जनस्वास्थ्य विषय विशेष गरी प्रिभेन्टिभ या रोकथाममूलक र प्रोमोटिभ या प्रबन्धात्मक स्वास्थ्यमा बढी जोड दिने विषय हो। यो विषय अध्ययन गरेकाले समुदायमा भएका मानिसको स्वास्थ्य कसरी जोगाउन सकिन्छ। मुलुकमा भएका मानिसका लागि स्वास्थ्य प्रबन्धमा के के भूमिका रहन्छ भन्ने कुराको सही मार्गदर्शन देखाउने अध्ययन हो। समाजमा विद्यमान स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक कारणले गर्दा समाजमा पारेको स्वास्थ्य प्रभाव जसका बारेमा सत्यतथ्य उत्पादन र तथ्यको सही प्रयोग गरी नीति निर्माण गर्न, योजना बनाउन, आवश्यक समन्वय गरेर कार्यक्रम गर्न आदिका लागि जनस्वास्थ्य विज्ञ आवश्यक पर्दछ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब ६ हजार ७ सय जति पब्लिक हेल्थमा रजिस्ट्रर भएका छन्। साँच्चि नै जनस्वास्थ्यकर्मी यति धेरै छन्, जसको सही सदुपयोग भएको देखिँदैन।
हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वन्चित नहुने नेपालको कानुनमा भएता पनि यसको कार्यान्वनमा निकै चुनौती थपिएको पनि देख्न सकिन्छ।
नेपालमा जनस्वास्थ्यकर्मी त्यस्तो धेरै मात्रामा भेटिँदैनन् त्यसो त जनस्वास्थ्य अध्ययन गरेका जनस्वास्थ्यकर्मीहरू नेपालमा रोजगारीको प्रशस्त अवसर नपाएर वा रोजगारीको सिर्जना नभएर कयौं जनस्वास्थ्यकर्मीहरू विदेश पलाएन हुनुपर्ने बाध्यता छ।
नेपालमै भएका जनस्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो अरू नै पृष्ठभूमिबाट रोजगारीमा छन्। सरकारले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु, लोकसेवा आयोगले विज्ञापन कम गर्नु, भएका सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थामा राजनीति तथा नातावाद कृपावादले छुनु जस्ता कारणले गर्दा जनस्वास्थ्यकर्मीले स्थान पाएका छैनन्।
नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा जनस्वास्थ्य अधिकृतको दरबन्दी स्थानीय निकायमा नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखादेखि सुरु भएको छ। प्रदेश अनि संघमा जनस्वास्थ्य अधिकृत र प्रशासकको दरबन्दी छैन।
नया दरबन्दी सिर्जना नगर्नु, लोकसेवा आयोगको समयमा विज्ञापन नहुनु यी कारण सरकारी सेवामा चुनौती थपिँदै गएको छ।
हरेक स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य अधिकृत, पारामेडिक्स, नर्सिङसहितको टिम राख्ने पछिल्लो मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय त निकै स्वागतयोग्य छ। जसको सही कार्यान्वयनमा भने निकै चुनौती देखिन्छ।
किनभने स्वास्थ्ययस्तो क्षेत्र जहा बढी राजनीति भएको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लागू गरेको कर्मचारी समायोजनले गर्दा विज्ञहरूले सही स्थान पाएका छैनन्।
नेपालमा सरकारी तहमा जनस्वास्थ्यको स्थिति थोरै केलायांै अब गैरसरकारी संस्थाको कुरा गरौं, गैरसरकारी संस्थामा अधिकांश संस्थाहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन्। त्यसमध्ये धेरै संस्थाहरूको फण्ड विदेशी निकायहरू छन्। सामान्य हात धुने कार्यक्रमका लागि उनीहरूसँग पाँचतारे होटलमा कार्यक्रम गर्ने बजेट हुन्छ। अनि काम गर्ने ठाउँमा भने आफ्नो आफन्त र इस्टमित्र हाबी देखिन्छ।
त्यस्ता गैरसरकारी संस्था जहाँ जनस्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ जनस्वास्थ्यकर्मी नभई अरु नै शिक्षा पढेका अनि अरु नै पृष्ठभूमिबाट आएका टिम छन्।
यो महामारीका बेला गैरसरकारी संस्थाहरू भूमिकामा देखिनुपर्ने बेला मौन देखिन्छन्।
पछिल्लो समय व्यापक रूपमा फैलिरहेको कोमिड–१९ ले यतिबेला विश्वलाई संशकित बनाइरहेको छ। जसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिरहेको छ। तर नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्य विज्ञहरूलाई सही तरिकाले परिचालन गरेको देखिँदैन।
यो महामारिका बेलामा जनस्वास्थ्य विज्ञ, चिकित्सक, माइक्रो बायोलोजिस्ट, नर्सिङ, पारामेडिक्सलगायतको विज्ञ टोली हरेक प्रदेश, हरेक स्थानीय निकायमा हुनुपर्दछ। यो भएमा मात्र हामीले केही हदसम्म महामारी रोकथाम गर्न सक्छौं। तर सरकारले यस्तो विषम परिस्थतिमा पनि विज्ञ टोली परिचालन गर्न सकेको छैन।
विपद्को बेला सबै सरकारी, गैरसरकारी, व्यवसायी परिषद, जनस्वास्थ्य सरोकारवाला निकायले हातेमालो गरी विज्ञ टोली बनाएर महामारी सामना गर्नुको विकल्प देखिँदैन । तसर्थ महामारीका बेलामा विज्ञहरूको सही परिचालन गरौं।